MALSHI.HTM - EEYAHA
Maltese / Shih Tzu ey isku dhafan oo isku dhafan
Niko the Mal-Shi qiyaastii 8 bilood jir
eeyaha ka bilaabma s
Mal-Shi maahan eey saafi ah. Waa iskutallaab udhaxeysa Malta iyo Shih Tzu . Habka ugu wanaagsan ee lagu go'aamiyo dabeecadda noocyada isku dhafan ayaa ah inaad ka raadiso dhammaan noocyada iskutallaabta isla markaana aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha laga helo nooc kasta. Maahan in eeyeyaashan eyda isku dhafan ee la dhalayey yihiin 50% saafi ah ilaa 50% daahir ah. Aad bay caan u tahay in kuwa wax soosaara ay tarmaan iskutallaabno jiil badan .
Naadiga Isku-dhafka Canine ee Mareykanka = Mal-Shi
Diiwaan Geliyaha Nakhshadeeye = Mal Shi
Naadiga Naqshadeeyaha Eeyaha Kaynta = Malti Tzu
Diiwaan Geliyaha Cunnada Caalamiga ah®= Mal-Shi
Waxaan ka helnay Braeden xayeysiis khadka tooska ah ah oo uu u baahan yahay guri ASAP ah. Waa gurigiisa SADDEXAAD . Milkiilihi hore ayaa isaga haystay muddo bil ah. Wuxuu jiray 16 toddobaad asagoon lahayn magac, qoor qabad, xiriir hooseeya eeyaha kale ama dadka. Wuxuu qabay Giardia, infekshannada dhegaha, miisaankiisu hooseeyo, iyo boodada ... wuu fiicnaa!
toy ingiriiska australia addoon buluug ah
'Wuxuu u muuqday nin sakhraansan oo Irish ah' sidaa darteed hal mar ayaan fiiriyey oo ku idhi ' waxaad u egtahay Braeden. Waa qaadatay waqti dheer loogu talagalay Braeden ku lifaaq oo aamin . Wali wuxuu baranayaa sida loola ciyaaro eeyo kale. Haatan 7 bilood ayuu diyaar u yahay inuu dhabteyda ku fariisto daqiiqado yar oo dheeri ah. Wuxuu jecelyahay inuu ciyaaro wuuna jecelyahay usha wanaagsan, la kulanka dadka cusub iyo eeyaha cusub.
'Sideed bilood, Braeden miisaankiisu waa 10.4 lbs., Waa 17' dherer iyo 10 ' dheer garabka. Braeden wuxuu leeyahay astaamo Shih Tzu ah: timo saddex-olor ah, dhego jaban, jidh dheer iyo timo qurxoon oo sankiisa ka sarreeya oo tilmaamaya. Laga soo bilaabo Malta, Braeden wuxuu helay timo khafiif ah oo toosan, sanka oo dheer iyo qaniinyo ka hooseysa oo u badan Shih Tzus. Sankiisu wuxuu umuuqdaa mid ka weyn Malta. Wuxuu noqon karaa mid aad u qalafsan oo maalin walba abaal marin ayuu ku siiyaa timahiisa. Si kastaba ha noqotee, lahaanshaha Mal-Shi iyada oo aan 'goos gooska ah' waa a u heellan . Braeden waa la cadaydaa subaxa hore iyo ka hor wakhtiga jiifka. Mararka qaarkood fadhi dheeraad ah ayaa loo baahan yahay si tartiib ah looga shaqeeyo guntirooyinka si fudud uga dhaca dhinaca hoose. Marka la cadeeyo maalin kasta, weligiis ma matalin. Kaliya waa inaad la socotaa. Wuxuu helaa qiyaas maalinle ah oo Indhaha Malaa'igta ah si uu u ilaaliyo wasakhda ilmada , kuwaas oo aad ugu badan labada Shih Tzu iyo Malta.
isku darka bulldog american iyo pitbull iib ah
Braeden tan iyo cadaan Mal-Shi oo ah eey yar markay jiraan 10 toddobaad
Dabeecaddiisu waxay la mid tahay Shih Tzu. Waa ciyaaryahan qalbi furan oo eyda kale leh. Wuxuu jecel yahay inuu ordo oo si firfircoon ula legdamo Shi Tzus kale . Isagu ma ahan eey dhab ah. Wuxuu jecelyahay la kulanka eeyaha cusub wuxuuna si gaar ah u jecelyahay la kulanka dadka cusub. Sida noocyada badankood, aad ayey muhiim u tahay inuu helo jimicsi, jir iyo maskax ahaanba. Wuxuu ahaa si sahlan loo tababarto adoo isticmaalaya suufka weelka. Laakiin wuxuu si dhakhso leh ugu beddelay inuu bannaanka aado. Hadduu shil galo waa inta u dhexeysa 7-9 fiidnimo meesha aanan daawanin inta biyo ah ee uu cabayay cashada iyo fiidka. Wuxuu ku deg degay inuu barto fadhiiso, joog, jiifso, ruxrux, soo qaado, ka tag oo daadi . '
Oreo madow iyo cadaan Mal-Shi eey yar ah oo jirta 12 toddobaad, culeyskiisuna yahay 3 rodol
Oreo ee madow iyo cadaan ah Mal-Shi eey yar oo jirta 19 bilood, culeyskiisuna yahay 7 rodol
Malshi puppy (Maltese x Shih-Tzu mix) —Rocky oo culeyskiisu yahay 2 rodol (toddobo toddobaad) iyo Muffy oo culeyskiisu yahay afar rodol (afar bilood).
'Jaxon waa eey isku dhafan Maltese / Shih Tzu. Wuxuu ku jiraa da'da 4½ bilood ee sawirkan. Wuxuu jecel yahay fiiro gaar ah iyo dadka, roogaga roogaga, dhunkashada bisad uu jecel yahay (Bella), socod gaaban iyo daaweyn. Waa qof aad u wanaagsan oo qof walba saaxiibtinimo leh, hooyadiisna waxay leedahay wuxuu leeyahay dabeecad ka badan Shih Tzu marka loo eego Maltese. '
Jimmy the Mal-Shih eey (Maltese / Shih Tzu) oo 15 toddobaad jir ah— 'Qofka ugu cusub qoyskeena ee kalgacalka iyo kalgacalka leh.'
waa cagajugle american ah dibi god
Bruno the Maltese / Shih Tzu iskutallaabtiisa (Mal-Shi) qof weyn
Bella, Mal-Shi (Maltese / Shih Tzu mix) 13 toddobaad, miisaankiisuna yahay 3 ½ rodol
'Sofie waa Mal-Shi (Maltese / Shi Tzu mix). Waxay qiyaastii tahay 10 bilood iyo 8 rodol. sawirkaan. '
Eeg tusaalooyin badan oo Mal-Shi ah
pomeranian qaso SUNTZU shih
Brindle Soshiyaaldimoqoraadiga Pei pitbull isku darka
chow chow pitbull mix oo iib ah
Maraykan Staffordshire Pit Chow Chow qaso
shilinta eeyaha dhegaha sawirrada
coyote ey iskujir ah oo iib ah